Họtelu ndi di na Dubai, Dubai Emirate - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Ihe Nkowa Banyere Dubai
Dubai bụ obodo nke mara nma puru iche nke kachasi na onu ogugu mmadu na mba United Arab Emirates na nke abụọ na ebe Abu Dhabi di, dị ka mba Emirate ndị kasị ukwu site na idabere na onu ogugu nke egberi. Ọ bụ ezie na oke ohia di, Dubai aghọwo obodo njem nleta di elu na ọtụtụ ihe oruru ndi di ịtụnanya nke na emela ka obodo a buru obodo di nma nke ukwu.
Obodo Dubai bu nke di na ndịda ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri nke Peasia Gulf nke na aghọwo ebe isi azụmahịa nke mpaghara obodo a. Dubai bụ obodo na-akpali mmasi nke onye njem nleta, nke na amụbanye na ulo ahia ọhụrụ na ogugo nke mba ụwa , enwekwara ụlọ oriri na ọṅụṅụ puru iche na hotelu ndi di elu nke ndi ogaranya.
Dubai nwere otutu ebe nịrịbama njem nleta nke oge ochie. Ihe ntuala nke Dubai ochie nke dị ka ebe Bastakiya District Wind Tower, Ebe ihe ngwa agha Ochie nke Dubai a na akpo (Dubai Museum), ulo akwukwo Al Ahmadiya bu nke ewuru na afo 1912 bụ cha ebe ogige njem nleta a ga ahụ. Otu n'ime ebe njem nleta a ga-ahụ na Dubai nke oge ugbu a bu ụlọ elu nke okpukpu ya di elu kari nke mba ụwa nile, Burj Khalifa nke nwere okpukpu otu nari na iri isii (160) nwere mgbidi mita ya di nari asato na iri abuo na asato na ogologo.
Na ihe karịrị ogige ụlọ ahịa di iri asaa , Dubai bụ ebe azumahia di nma nke ukwuu nwere ulo ebe azumahia nke kachasi ukwu na ụwa, ụlọ ahịa ukwu nke Dubai. Ebe njem nleta ndị ọzọ bụ ebe isi mmiri nke Dubai (Dubai Fountain) , Palms Islands, Dubai Marina na Burj al- Arab Hotelu ama ama eji kpakpando asa mara ụdi ya.
Maka ntụrụndụ, I ga nleta na ogige odo nke oke osimiri ga abu ezi ihe. I pukwara I ga huta odo mmiri egwuruegwu na nke oso inyinya ibu na-akpali mmasi. Ọ bụ ezie na enweghị iwu atumatu ejiji nke ndi alakuba, ọ bụ iwu na I ga ejike-njike di nma na anya.
Ulo Onuno na Dubai
E nwere otutu hotelu ndi ogaranya na Dubai, ụlọ onye ọbịa maka onuno. Site na I dabere na ego gị, e nwere hotelu nari atọ na iri anọ na atọ (343) na Travel.jumia.com. Ị nwere ike ichoputa na ngwangwa maka hotelu ndi di ọnụ ala ma ọ bụ ga etinye akwụkwọ maka hotelu ndi di na Abu Dhabi, bu nke na ewere otu awa na okara nkeji iri atọ nke elekere di anya na Dubai.
Usoro Ime Njem DUBAI
Usoro ime njem na Dubai bụ site ugboala bụs, tagzi, ugbo miri, ugbo nke okporo igwe bu nke di mfe na I nweta site na mpaghara obodo nta ya ọ bụla. Ị ga enweta ugboala tagzi ma ọ bụ ụgbọ ala ndi ozo na gburugburu hotelu na kwa ulo azumahia. Usoro nke iji ugboala bọs mee njem bụ nke dị ọnụ ala karịa. Igba Ugbọ mmiri gafee ọfe mmiri Dubai ga enye gi ohere oma maka Ihuta ime obodo nke Dubai.